Ch 2 Luke – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Lioka / Ch 2 Luke
2:1 Ary tamin'izany andro misy didy niala teo amin'i Kaisara Aogosto, ka izao tontolo izao ho voasoratra anarana.
2:2 Izany no voalohany fisoratana anarana; dia natao noho ny mpanapaka ny Syria, Kyrenio.
2:3 Ary rehetra nankany azo ambara ho, samy ho any amin'ny tanànany avy.
2:4 Ary Josefa koa niakatra avy tany Galilia, avy any an-tanàna Nazareta, ho any Jodia, ho any an-Tanànan'i Davida, izay atao hoe Betlehema, satria avy tamin'ny an-trano sy ny taranak'i Davida,
2:5 mba ho azo ambara ho, sy Maria fofom-badin'ny vadiny, izay bevohoka.
2:6 Avy eo dia nitranga fa, raha mbola teo izy ireo, ny andro dia vita, ka dia izy no hiteraka.
2:7 Ary niteraka ny Lahimatoany. Dia nofonosiny azy amin'ny fonony akanjo ka nampandriny teo amin'ny fihinanam-bilona, satria tsy nisy toerana ho azy ireo ao amin'ny tranom-bahiny.
2:8 Ary nisy mpiandry ondry tamin'izany tany izany faritra, ho mailo sy ny fitandremana fiambenana amin'ny alina ny ondriny.
2:9 Ary indro, nisy anjelin'ny Tompo nitsangana teo akaikiny, Ary teo amin'ny famirapiratana 'Andriamanitra nanelatrelatra manodidina azy, ary dia nozoin 'ny tahotra be.
2:10 Ary hoy ilay anjely taminy: "Aza matahotra. Fa, indro, I manambara aminareo ny fifaliana lehibe, izay ho an'ny olona rehetra.
2:11 Fa amin'izao fotoana izao ny Mpamonjy no teraka ho anareo tao an-Tanànan'i Davida: Izy dia Kristy Tompo.
2:12 Ary izao no ho famantarana ho anao: ho hitanao ny zazakely voahodidina lamban-jaza sady mandry ao anaty fihinanam-bilona. "
2:13 Ary tampoka nisy ny anjely maro be avy amin'ny tafika selestialy, nidera an'Andriamanitra nanao hoe,
2:14 "Voninahitra ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra, sy ny fiadanana eto an-tany ny olona tsara sitrapo. "
2:15 Ary nony fa, rehefa ny anjely efa niala azy ho any an-danitra, ny mpiandry ondry dia nifampilaza, "Andeha isika hiampita ho any Betlehema ka hizaha izany teny, izay nitranga, izay nambaran'ny Tompo ho antsika. "
2:16 Dia nandeha faingana. Ary nahita an'i Maria sy Josefa; ary ny zazakely nandry teo am-pihinanam-bilona.
2:17 Avy eo, rehefa nahita izany, fantany ny teny izay efa niteny taminy ny amin'izany zaza.
2:18 Ary izay rehetra nandre dia talanjona noho izany, sy ireo zavatra izay nilaza taminy ny mpiandry ondry.
2:19 Fa Maria kosa nitadidy izany teny rehetra izany, nieritreritra azy tao am-pony.
2:20 Ary ny mpiandry ondry niverina, nanome voninahitra sy nidera an'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay efa reny sy hitany, fotsiny araka izay nolazaina taminy.
2:21 Ary nony afaka havaloana, tapitra, ka dia ilay zazalahy dia hoforana, ny anarany nataony hoe JESOSY, araka izay efa nantsoin 'ny anjely, fony tsy mbola torontoronina tao an-kibo.
2:22 Ary rehefa tapitra ny andro fidiovany dia tanteraka, araka ny lalàn 'i Mosesy, dia nitondra azy ho any Jerosalema, Amin'izay dia mba ho azy ho an'ny Tompo,
2:23 araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'i Jehovah, "Fa ny lahy voalohan-teraka rehetra hatao hoe masina ho an'i Jehovah,"
2:24 ary mba hanatitra fanatitra, araka izay voalaza ao amin'ny lalàn'ny Tompo, "Domohina na zana-boromailala roa."
2:25 Ary indro, nisy lehilahy tao Jerosalema, atao hoe Simeona, ary marina io Lehilahy io sy natahotra an'Andriamanitra, niandry ny fampiononana ny Isiraely. Ary ny Fanahy Masina dia tao aminy.
2:26 Ary efa nahazo valiny avy amin'ny Fanahy Masina: fa tsy hahita ny fahafatesana izy mandra-pahitany an'i Kristy 'ny Tompo.
2:27 Ary nandeha tamin'ny Fanahy ho any amin'ny tempoly. Ary raha Jesosy zaza nentina tao amin'ny ray aman-dreniny, mba hanao zavatra niaraka tamin'izay hanao araka ny fomban'ny lalàna ny amin'ny,
2:28 dia nentiny niakatra koa, an-sandriny, Dia nitso-drano an'Andriamanitra ka nanao hoe::
2:29 "Ankehitriny dia mety handroaka ny mpanomponao soa aman-tsara, Tompo O, araka ny teninao.
2:30 Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao,
2:31 izay efa namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra:
2:32 ny fahazavan'ny fanambarana ho an'ny firenena sy ny voninahitry ny Isiraely olonao. "
2:33 Ary ny ray aman-dreniny dia nanontany tena tsara izany, izay nolazainy momba azy.
2:34 Ary Simeona nitso-drano azy ireo, ary hoy izy tamin-dreniny Maria: "Indro, ity iray ity no voatendry ho amin'ny faharavana sy ny fitsanganana amin'ny maty ny maro ao amin'ny Isiraely, ary ho toy ny famantarana izay ho nanohitra.
2:35 Ary ny sabatra dia handeha hamaky ny tenany, ka ny hevitry ny fo maro mba haseho. "
2:36 Ary nisy mpaminanivavy, Anna, ny zanakavavin'i Fanoela, avy tamin'ny firenen'i Asera. Tena nandroso izy amin'ny taona, ary efa nitoetra tamin'ny vadiny nandritra ny fito taona taorian'ny naha-virijina azy.
2:37 Ary avy eo dia efa mpitondratena, dia ho azy fahefatra amby valo-polo taona. Ary tsy niala tao amin'ny tempoly, izy mpanompo ny fifadian-kanina sy ny vavaka, andro aman'alina.
2:38 Ary raha niditra tao tamin'izany ora izany, dia niaiky tamin'ny Tompo. Ary niteny momba Azy tamin'izay rehetra niandry izay ny fanavotana an 'i Isiraely.
2:39 Ary rehefa vitany ny zavatra rehetra araka ny lalàn'ny Tompo, dia niverina tany Galilia, ho any an-tanànany, Nazareta.
2:40 Ary ny Zaza dia nitombo, Ary dia nampaherezina ny fahafenoan'ny fahendrena. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao ao aminy.
2:41 Ary ny ray aman-dreniny nankany Jerosalema isan-taona, tamin'ny fotoana ny fanetriketrehana ny Paska.
2:42 Ary rehefa roa ambin'ny folo taona lasa, dia niakatra tany Jerosalema, araka ny fanao amin'ny andro firavoravoana andro.
2:43 Ary rehefa tapitra ny andro, rehefa niverina, ny zaza nijanona tany Jerosalema i Jesosy. Ary ny ray aman-dreniny no tsy tonga saina izany.
2:44 Fa, satria nataony fa efa tao amin'ny orinasa, dia nandeha lalana indray andro, nitady Azy tamin'ny havany sy ny olom-pantany ireo.
2:45 Ary satria tsy nahita azy, dia niverina ho any Jerosalema, mitady azy.
2:46 Ary nony fa, rehefa afaka telo andro, dia hitany teo an-kianjan'ny tempoly, nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra, nihaino sady nanontany azy.
2:47 Fa izay rehetra nihaino Azy dia talanjona indrindra no mpifehy ny fahamalinana sy ny valin-.
2:48 Ary rehefa nahita azy, nanontany tena izy ireo. Ary ny reniny nanao taminy hoe:: "Zanaka, nahoana no nanao zavatra toy izao ho antsika? Indro, ny rainao sy izaho nitady anao amin'ny alahelo. "
2:49 Ary hoy Izy taminy:: "Ahoana moa no nitady ahy ianareo? Fa Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho ahy ny ho eo ireo zavatra izay 'ny Raiko?"
2:50 Ary tsy fantany ny teny izay nolazainy taminy.
2:51 Dia nidina niaraka taminy ka nankany Nazareta. Ary izy dia ambany noho ireo. Ary ny reniny nitahiry izany teny rehetra izany tao am-pony.
2:52 Ary Jesosy nandroso tamin'ny fahendrena, ary amin'ny taona, ary amin'ny fahasoavana, tamin'Andriamanitra sy ny olona.